Barcelona Oo Maanta Dib Ugu Soo Laabtay Tababarka Kooxdeeda, Lionel Messi Oo Seegay Iyo Luis Suarez Oo Qayb Ka Ahaa | Warmaalnews.com
Barcelona Oo Maanta Dib Ugu Soo Laabtay Tababarka Kooxdeeda, Lionel Messi Oo Seegay Iyo Luis Suarez Oo Qayb Ka Ahaa
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde iyo ciyaartoyda kooxdiisa ee aan qaybta ka ahayn kulamada caalamiga ah ee xulalka qaramada aduunka ayaa galabnimadii maanta oo isniin ahayd dib ugu soo laabtay xarunta tababarka si ay u bilawdaan diyaar garowga kulanka Catalan Derby ee Espanyol.
Laakiin tababarkii galabta ee kooxda Barcelona waxaa seegay Lionel Messi oo dhaawac kala soo laabtay waajibaadkii xulka qarankiisa Argentina kadib markii uu ciyaaray kulankii Venezuela doo dhamaystirnaa laakiin waxa uu maanta awoodi waayay in uu ka soo muuqdo xarunta tababarka Barcelona.
Luis Suarez oo dhaawac ku seegay kulamada xulka qarankiisa Uruguay ayaa maanta ka soo muuqday tabababarka laakiin goobta uu tababarka ku qaadanayay ayaan ahayn garoonka dooga leh balse waxa uu soo kabashadiisa ku qaatay garoonka ciida ama niista ah ee ay ciyaartoydu ka soo bilaabaan ka soo kabashada dhaawac.
Barcelona waxaa wali kaga maqan kulamada caalamiga ah ciyaartoy dhawr ah oo ay ka mid yihiin Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alaba iyo Carles Alena oo dhamaantoo reer Spain ah si la mid ah Arthur Melo iyo Coutinho oo waajibaadka Brazil ku maqan.
Waxa kale oo Barcelona ka maqan difaaca reer France ee Samuel Umtiti, Ivan Rakitic oo Croatia ku maqan halka Arturo Vidal iyo xidigo kale ay ka mid yihiin ciyaartoyda aanu wali Valverde garoonka tababarka kooxdiisa ku haysan.
Laakiin wali waxaa jira xidigo badan oo kooxda kowaad ah kuwaas oo uu Valverde ku shaqaynayo laakiin maqnaansha Lionel Messi ayaa ah waxa ugu wayn ee walwalka ku haya jamaahiirta Barcelona.
Barcelona ayaa dhawaan la ciyaari doonta kooxda ay sida wayn xifil tamaan ee Espanyol kulanka horyaalka La Liga ee kadib kulamada caalamiga ah wuxuuna haddaba Suarez bilaabay laakiin Ousmane Dembele ayaa ah xidiga shaqada ugu badan qabanaya si uu u soo laabto.
Wargayska AS ayaa shaaciyay in Ousmane Dembele uu noqday xidiga ugu shaqada adag ciyaartoyda Barcelona ee doonaya in uu hore u soo laabto taas oo gabi ahaanba ka duwan xaaladihii uu horaantii xili ciyaareedkan soo maray waxayna wararku sheegeen in Dembele uu todobaadka oo dhan tababar qaadanaya isla markaana uu maanta oo isniin ah shaqadan sii watay.